MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 4
မဟေသီအယ်ဒီတာချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး (ငြိမ်း) စောမြင့် (၉၁ နှစ်) ကွယ်လွန်
လှကျော်ဇော - မေမေ့ရဲ့ အပြောင်မြောက်ဆုံးသော အခန်းကဏ္ဍ
>Cartoon Maung Yit - Towards One Happy Birthday Without Political Prisoners
အောင်ကိုလတ် (တမူး) ● ရယ်​စရာမှတ်​စု (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ ဖတ်ခဲ့​​တယ်​ နှာ​ခေါင်းကို​သွေးထွက်​​အောင်​လက်​သီးနဲ့ထိုးတာဟာ တုပ်​​ကွေးကာကွယ်​​ဆေးထိုး​ပေးတာလို့မှတ်​ပါဆိုတာမျိုး ဖတ်​ခဲ့ဖူးတယ်​ စစ်​​မြေပြင်​မှာ​တော့ ရှင်​ဟာ သူရဲ​ကောင်းတယောက်​ဖြစ်​​ပေမယ့်​ အိမ်​မှာ​တော့ရှင်​ဟာသူရဲ​ကောင်းတ​​ယောက်​မဟုတ်​ဘူးဆိုတာမျိုး ဖတ်​ခဲ့​ရတယ်​ အမျိုးသမီး​တွေကသူတို့ကို​ဘောင်​ခတ်​ချုပ်​ခြယ်​ထားတယ်​ဆိုပြီး အတွင်းခံအင်္ကျီ​တွေကိုချွတ်​ ​မီးရှို့ဆန္ဒပြကြတယ်​ဆိုတာမျိုး ဖတ်​ခဲ့​သေးတယ်​ နှိပ်​စက်​ခံရလွန်းလို့ ကိုယ့်​ဘာသာစကားနဲ့ကိုယ့်​ကိုဆဲရင်တောင် ကိုယ့်​နိုင်​ငံကိုပြန်​​ရောက်​ပြီလို့စိတ်​ကူးယဉ်​ပစ်​လိုက်​တယ်​ဆိုတာမျိုး ​ဖတ်​ချင်​​သေးတယ်​ နိုင်​ငံ​တော်​သီချင်းသံကြားရင်​ ​ရောက်​တဲ့​နေရာမှာရပ်​ပြီး အ​လေးပြုကြတယ်​ဆိုတာမျိုး ထပ်​ဖတ်​ချင်​​သေးတယ်။ ​အောင်​ကိုကိုလတ်​ (တမူး) Tags: အောင်ကိုလတ် (တမူး) Related posts No related posts.
ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ ဖော်ပေးကြပါဦး …
ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ ဖော်ပေးကြပါဦး … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) Related posts ကာတွန်း သာလှ(နတ္တလင်း) – မွေးနေ့ဆိုလို့ (0) ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ သိပြီးပါပြီကွာ … (0) ကာတွန်း သာလှ (နတ္တလင်း) ရဲ့ စားပြီးသူတွေ ထွက်ကြပါ … (0)
ငြိမ်​သက်​ခြင်း၏ အခြားတစ်​ဖက်​မှာ (ရုပ်​ပုံလွှာအမှတ်​တရ) နိုင်​ ဝင်း သီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၈ (၁) ” ဟား ..ဟား..ဟား..ဟား “ ရယ်​​မောသံဟာ မခိုးမခန့်​ရယ်မောလိုက်​တဲ့ရယ်​သံမျိုး။ ဘယ်​သူ့ကိုမှ စာရင်းဇယားထဲထည့်​မထားတဲ့ရယ်​သံမျိုး။ ခပ်​အုပ်​အုပ်​ရယ်​​မောလိုက်​တာဖြစ်​​ပေမဲ့ ​အဲဒီတိုးတိတ်​တဲ့ရယ်​​မောသံကပဲ မတ်​လရဲ့​နေ့လယ်​ခင်းကြီးထဲကို မိုးခြိမ်းသလို ထစ်​ချုန်းစီးဆင်းသွားခဲ့။ အိကျ​နေတဲ့ဓာတ်​ကြိုး​ပေါ်က အ​ရောင်​မွဲမွဲ မြို့ပြခိုသုံး​လေး​ကောင်​ဟာ ​တောင်​ပံတဖျပ်​ဖျပ်​ခတ်​ပြီး တိုက်​​ခေါင်​မိုးတ​ခု​ပေါ် ထပျံသွား။ ​” ​ကောင်းတာ​ပေါ့ကွာ ..သိပ်​​ကောင်းတာ​ပေါ့ကွာ “ ထူထူပွပွသူ့ရဲ့ဆံပင်​အုံကြီးဟာ ခပ်​​ငေါ့​ငေါ့​ပြော​နေ​တဲ့သူ့နှုတ်​ဖျားက စကားလုံး​တွေ​ကြားမှာ တ​ချက်​တ​ချက်​လှုပ်​ခါသွား။ ​မွန်းတည့်​နေဟာ ၄၅ လမ်းအထက်​ဘ​လောက်​မှာ ရပ်​တန့်​ငြိမ်​သက်​​လို့။ ပူ​လောင်​အိုက်​စပ်​​နေတဲ့ ​နေ့လယ်​ခင်းဟာ သူ့ရဲ့ ရယ်​​မောသံကြီးအောက်​မှာ ပိုပြီး​တော့ ပူ​လောင်​အိုက်​စပ်​သွားခဲ့။ မ​ဟေသီကဆုတ်​ခွာလာကတည်းက စိတ်​ဟာ...
ကိုသန်းလွင် – ဗွီဒီယို အကူအညီနှင့်ဒိုင်လူကြီး
ကိုသန်းလွင် – ဗွီဒီယို အကူအညီနှင့်ဒိုင်လူကြီး (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၈ (၁)ဘောလုံးပွဲဆိုသည်မှာ များစွာသည်းထိတ်ရင်ဖိုရသော ကစားနည်းဖြစ်ပါသည်၊ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းတွင် အလုပ် များ၊ အလုပ်ရှုပ်သူ ဒိုင်လူကြီးများက တက်သုတ်ရိုက်အကဲဖြတ်ပေးရပါသည်၊ ကိုက် ၃၀ခန့်ကကန်လိုက်သော ဘောလုံးအတွက်လူအောက်ဆိုက်ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်းကောင်း၊ ကစားပွဲကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော ပင်နယ်တီ ဘောကို ပေးထိုက် မပေးထိုက၊် ဘောလုံးဂိုးထဲဝင်မ၀င် စသဖြင့်လည်းကောင်း၊ အရေးကြီးသော ဆုံးဖြတ်ချက် များကို တတ်သုတ်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ရလေ့ရှိပါသည်။ စိတ်လှုတ်ရှားရသော ပွဲများတွင် ကျဉ်းကြပ်သော စည်းမျဉ်းများကြားမှရွေ့လျားလှုပ်ရှားနေသော ဘောလုံး နှင့် အတူ အမှီလိုက်ရသောအခါ တခါတရံ ရော်ရမ်းမှန်းဆပြီးသာ ဆုံးဖြတ်ပေးရသောအခါများလည်းရှိပါသည်။ ဤကဲ့သို့ အဆုံးအဖြတ်ပေးရသော လူ၏နေရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်နိုင်ရန် အတွက် FIFA က ( ကမ္ဘာ့ဘော်လုံးအသင်းချုပ်) သိပ္ပံနည်းများကိုအသုံးပြု၍ အမြဲတိုးတတ်အောင်...
ကာတွန်း ကိုတေ – သူတုို့နဲ့ အတူတူ ဆိုတာ
ကာတွန်း ကိုတေ – သူတုို့နဲ့ အတူတူ ဆိုတာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ကိုတေ Related posts ကာတွန်း ကိုတေရဲ့အတွေး (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ နေရာယူတတ်သူ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ ဆေးပြီးနေတဲ့ နိုင်ငံ (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ အမြင့်ရောက်လေ .. လေပိုတိုက်လေ … (0) ကာတွန်း ကိုတေရဲ့ ထမ်းနိုင်တုန်းလေး ထမ်းခွင့်ရတာ (0)
ကိုဇော်(ကလေးမြို့ ) – ပြောရင်မောတယ် ပြေးရင်းနှေးတယ်
ပြောရင်မောတယ် ပြေးရင်းနှေးတယ် ကိုဇော်(ကလေးမြို့ ) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ ခလုတ်တိုက်မိရင် ကျောက်ခဲပဲ ခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျရင် သစ်ကိုင်းပဲ လေထဲလွင့်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ တဒိုင်းဒိုင်းဝင်တိုက်နေတဲ့ ခေါ်သံတွေ အိပ်မက်ထဲဝင်ဆွဲတဲ့ ခွေး အိပ်ရာထဲဝင်စားတဲ့ ကျား ရေခဲသေတ္တာထဲက အသား အနာဂတ်ကို အမြန်ပြန်နွှေးထား ဖျစ်ဖျစ်မြည်အောင်အရည်ပျော်ကျနေတဲ့စာသားတွေ ကမ္ဘာဟာ ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ် အေကေ ၄၇ ကိုင်ထားတဲ့စင်ယော်တကောင်ဟာလည်း ခင်ဗျားမျက်ဝန်းတွေထဲ ဖြတ်ပျံသွားပါတယ် သူ့ကိုယ်သူဖောက်သောက်နေတဲ့ကလေးတယောက်လည်း ခင်ဗျားဦးနှောက်ထဲ ဝင်ခွေသွားပါတယ် အဲ့ဒီကလေးလည်း ဘယ်တော့မှမသေတော့ပါဘူး ခင်ဗျားလည်းပြန်ရှင်မလာတော့ဘူး ။ ။ 26.1.2018. No tags for this post. Related posts No related posts.
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Beat around the bush
ကာတွန်း မောင်ရစ် – ရွှေမိနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ – Beat around the bush (Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မိုးမခ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ သန်းဌေးမောင် K ငြိမ်းချမ်း – အနက်ရောင် ဆဲဗင်းဂျုလိုင် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ ဇူလိုင်လဟာ မိုးရေတွေကြားမှာ ဆွေးမြေ့စရာ၊ လွမ်းစရာကောင်းနေပါတယ်။ ဒီထက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရရင်တော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းထဲမှာ ဇူလိုင်လဟာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များနဲ့ လွမ်းစရာကောင်းနေပါတယ်။ ဘာကြောင့် လွမ်းဆွေးစရာကောင်းသလဲဆို ၇ဇူလိုင်နဲ့ ၁၉ဇူလိုင်တို့ကို ဟောဒီ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာ မလိုချင်ဘဲ အာဏာရူးတို့ တဏှာမူးခဲ့ကြလို့ဆိုတာ နိုင်ငံသိဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ချဲ့လက်အောက်က ဟောဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကို အားနဲ့ဆယ် ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အပါအ၀င် အစိုးရ အဖွဲ့ကြီး တခုလုံးကို အတွင်းဝန်ရုံးထဲမှာ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဇူလိုင် ၁၉ရက်ဟာ မြန်မာ့ပြက္ခဒိန်ထဲမှာ ပြည်သူလူ ထုစိတ်ထဲမှာ မင်နီခြစ်ထားခဲ့ရတဲ့နေ့တနေ့ဖြစ်ခဲ့လို့ပါပဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့သူရဲကောင်းတွေကို ရက်ရက်စက် စက်လုပ်ကြံသတ် ဖြတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အာဇာနည်နေ့ဆိုတဲ့...
စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ Yangon Book Plaza K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ ဦးစိန်မြင့် (သတ္တုဦးစီး)ရေးသားတဲ့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လောင်စာများနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း အမည်ရတဲ့စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားနဲ့အတူ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ အစီအစဉ်တခုကို ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်မြို့နယ် သံဈေး ငါးလွှာရှိ Yangon Book Plaza မှာ ဇူလိုင်လ ၈ရက် နေ့လယ် ၁ နာရီမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါ စာအုပ်မိတ်ဆက်ခြင်းအခမ်းအနားမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဟောပြောမယ့်သူများက တက္ကသိုလ် မိုးဝါ၊ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို၊ ဦးစိန်မြင့် (သတ္တုဦးစီး) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး “မြို့ပြရဲ့ နေ့စဉ် လူနေမှူ ဘ၀မှာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုတာ မရှိမဖြစ် အရေးပါလျက်ရှိပါတယ်။...
စာရေးဆရာမကြီး မကြန် အသက်(၁၀၀)ပြည့် ဂါရ၀ပွဲ စာပေဗိမာန်မှာ ပြုလုပ်မယ် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၇၊ ၂၀၁၈ စာရေးဆရာမကြီး မကြန် အသက် ၁၀၀ပြည့်မွေးနေ့ပွဲနဲ့ဆရာမကြီးအား ဂါရ၀ပြုပွဲကို ဇူလိုင် ၇ရက်နေ့မှာ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်လမ်းရှိ စာပေဗိမာန်ခန်းမမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါပွဲကို ဆရာမကြီးအား လေးစားချစ်ခင်သူများက စီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ဆရာမကြီးကိုဂုဏ်ပြုရည်ရွယ်ကာ ရာပြည့်သမိုင်းဒေ၀ီစာအုပ်ကိုလည်း ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ စာရေးဆရာမကြီး မကြန်ကို ရခိုင်ပြည်နယ်သံတွဲမြို့မှာ ၁၉၁၉ဇူလိုင် ၁ရက်တွင် အဖ-ဦးကျော်ထွန်း၊ အမိ ဒေါ်ငွေနှစ်တို့မှ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၅၆ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်း ကော်မရှင်(နောင် သမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာန)မှာ ကျမ်းပြုအရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းရင်း သမိုင်းမဟာဝိဇ္ဇာတန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့။၁၉၅၇ခုနှစ်မှ ၁၉၅၉ခုထိ နိုင်ငံသမိုင်းသုတေသနဦးစီးဌာနမှာ အကြီးတန်းသုတေသနမှူးအဖြစ် အမှုထမ်းစဉ် မြန်မာ့သမိုင်း အထောက်အထားများကူးယူစုဆောင်းရေး စီမံကိန်းအရ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ...
ဌေးဝင်း (ဂျာမဏီ) ● မှတ်မိသမျှ အညာ (သို့မဟုတ်) တောင်သာ
ဌေးဝင်း (ဂျာမဏီ) ● မှတ်မိသမျှ အညာ (သို့မဟုတ်) တောင်သာ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၈ မိုးမခကို အင်တာနက်မှာ အမြဲဖတ်ဖြစ်တော့ ဆရာမောင်စွမ်းရည်ရဲ့ ဆောင်းပါးများကို အမြဲဖတ်ဖြစ် တယ်။ သူ့ရဲ့ ဆောင်းပါးတွေမှာ သူ့ဇာတိ မြင်းခြံ အကြောင်းနဲ့ သူအမြဲရေးတဲ့ ဆရာတင်မိုးရဲ့ဇာတိ တောင်သာ အကြောင်းတွေ အမြဲဖတ်ရတော့ ကျနော်ငယ်စဉ်အခါက သုံးနှစ်လောက် နေခဲ့ဘူးတဲ့ တောင်သာမြို့လေးကို အမှတ်ရလာမိတယ်။ မြင်းခြံ၊ တောင်သာဆိုတာ အညာဒေသ စစ်စစ်ဆို တော့ အညာဓလေ့၊ အညာအငွေ့အသက်လေးတွေလဲ မမေ့နိုင်စရာ စိတ်စေတသိက် မြင်ကွင်းမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပြန်ပေါ်လာတယ်။ ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပီ။ ကျနော့်ဖခင်က အစိုးရဝန်ထမ်း ဆိုတော့ သုံးနှစ်တကြိမ်လောက် တမြို့နယ်ကနေ တမြို့နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့နေရစဉ်မှာ ၁၉၆၆...
ဇင်လင်း ● ကချင်စစ်ပွဲဟာ တကယ်ပဲ “အဆုံးသတ်မရှိတဲ့ စစ်ပွဲ” ဖြစ်နေပြီလား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂ဝ၁၈ မြန်မာပြည်မှာ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး’ ဒါမှမဟုတ် ‘ချွင်းချက်မရှိ စစ်ပွဲတွေ ရပ်စဲရေးကိစ္စ’ ဟာ လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်တခု နှစ်ခုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် လက်ရှိအခြေအနေ ဖြစ်စဉ်တွေအရ အဖြေမရှိသေးပါလို့ ဆိုရ ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလားအလာ မှေးမှိန်နေရတာလဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အလှမ်းဝေးနေ ရခြင်းဟာ အဆုံးအဖြတ်ပြုနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်များ အလိုလောဘကြီးလွန်းတဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအား ဖြင့် အတ္တနဲ့မာန်မာန အစွဲအလမ်းတွေကို လျှော့မချနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးစကားဝိုင်း တွေမှာ သာမန်စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေကအစ အချိန်အတော်ကြာအောင် ညှိနှိုင်းနေရတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့...
ရိုးတံ (ပုလဲနယ်) ● ဆွတ်ပျံ့ပျံ့ ငံ့လင့်သူ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၈ စံပယ်ရုံကလေး ကမ္ဘာမြေကြီးကို ဆွေးဆွေးမြေ့မြေ့ ဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။ တောရနံ့က သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ သင်းပျံ့လို့။ မိုးစက်မိုးပေါက်တွေ ဖြန့်ခင်းအိပ်တဲ့အခါ ယုံကြည်ရာကို ငေးမျှော်ကြည့်နေတယ်။ ရှင်သန်ခြင်း ညနေခင်းအလှတရား သံဝေဂများနဲ့ ညှိုးခွေသွားတဲ့ သူ့အဆင်း ငြင်းခုံစရာလည်း မရှိတော့ပါ။ ဆင်ခြင်တုံတရား အရုဏ်ဦးတံခါး ခပ်ဝါးဝါး အလင်းတန်း ကိုယ်မှန်းမျှော်ထားတဲ့ဆီ အားတင်းပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။ ရိုးတံ (ပုလဲနယ်) Tags: ရိုးတံ (ပုလဲနယ်) Related posts ရိုးတံ (ပုလဲနယ်) ● နံရံအကွယ်များ (0) ရိုးတံ (ပုလဲနယ်) ● တခန်းရပ်ပြဇာတ် (0) ရိုးတံ (ပုလဲနယ်)...
ခိုင်မျိူး – ကျ​​နော် ​ဖြန့်​ချိ​ရေးသမား (အခန်းဆက်များ) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၈ (၁) ဖိုးရှုတ်​ဆိုတဲ့ငနဲက ဘာ​ကောင်​လဲ။ စာ​ပေ​လောကမှာ ဝင်​အလုပ်​လုပ်​ပြီး အသက်​​မွေးဝမ်း​ကြောင်း အလုပ်​​တွေကို ဝင်​ရှုတ်​​ထွေး​အောင်​ လုပ်​​နေသူလား။ သူ့ဆိုင်​မှာ တင်​ထားလိုက်မိတဲ့ စာအုပ်​ကို ​ခြောက်​လအကြာမှာ ပြန်​သိမ်းဖို့ သူ​ပေးထားတဲ့​ဘောက်​ချာကိုင်​ပြီးသွား​တော့ တင်​ထားတဲ့ စာအုပ်​နမူနာ ယူလာပြပါဆိုလို့ စာအုပ်​နမူနာ​လေး အိမ်​ပြန်​ယူပြီး​ နောက်​​နေ့မှာ ​နောက်​တ​ခေါက်​ထပ်​သွားရပြန်​တယ်​။ ဖိုးရှုတ်​ဆိုင်​က ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်​ထဲမှာ၊ ကိုယ်​​နေတာကအလုံမြို့နယ်​ထဲမှာ ဆို​တော့ အသွားအပြန်​ တစ်​နာရီ​ကျော်​ အချိန်​မ​ပေးရင်​ သွားလို့မရဘူး၊ ကား​တွေ မတန်​တဆသွင်းထားလို့ လမ်းနဲ့ကား မမျှ​တော့ ရန်​ကုန်​လမ်း​တွေ​ပေါ် ​နေ့ဆို ကား​တွေ လိပ်​လိုသွား​နေတာကြာပြီ။ ထားပါ … ဒါက သပ်​သပ်​​ရေးရမယ့်​ ဇာတ်​လမ်းရှည်​ကြီးတပုဒ်​ပဲ။ ​နောက်​​နေ့ ဖိုးရှုတ်​ဆိုင်​ရှိရာ...
ကာတွန်း ATH – Our Super Heroes
ကာတွန်း ATH – Our Super Heroes (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
ပန်းချီထိန်လင်း စီစဉ်တဲ့ ဆဲဗင်းဂျုလိုင် အမှတ်တရ ဆယ်စုနှစ် ခုနစ်ဆက် K (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၈ ဆယ်စုနှစ် ခုနစ်ဆက်လို့ အမည်ပေးထားပြီး ပန်းချီ ထိန်လင်းနဲ့ ပဉ္စရသအဖွဲ့တို့မှ စီစဉ်ကျင်းပသော ပန်းချီအနုပညာ လက်ရာပြပွဲကို ဇူလိုင် ၇ရက်မှ ၃၁ရက်ထိ ရန်ကုန်မြို့သိမ်ဖြူလမ်းရှိ ၀န်ကြီးများရုံးမှာ နေ့လယ် ၂နာရီမှာ ဖွင့်လှစ်ပြသ သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ ပြပွဲမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့မျက်မှောက်ခေတ် ကွန်တမ်ပိုရာရီ အနုပညာရှင်များရဲ့မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေး သမိုင်းကြောင်းဆိုင်ရာ အရေးပါလှသော ဇူလိုင်လ အထိမ်းအမှတ် သမိုင်းဆိုင်ရာ အနုပညာလက်ရာများကို ပြသသွားမယ်လို့သိရပြီး ပါဝင်ပြသ မယ့်အနုပညာရှင်များကတော့ ၀င်းဖေ၊ မောင်ဒီ၊ အောင်မြင့်၊ စန်းမြင့်၊ ဆန်နီညိမ်း၊ မသီဂီ င်္၊ချမ်းအေး၊ ဖြူမွန်၊ စံမင်း၊ အမ်ပီပီ ရဲမြင့်၊ စိုးနိုင်၊...
ညီဆောင်းဦး ● အမှားနှစ်ကြိမ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၈ ကျွန်တော့်အသက် ၁၂ နှစ်။ စာဖတ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရွယ်ကတည်းက စာအုပ်မျိုးစုံကိုဖတ်ခဲ့တယ်။ ကာတွန်း၊ ရုပ်ပြ၊ ဝတ္ထု စတဲ့စာပေအမျိုးအစားတွေအပြင် ကျွန်တော့်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်လောက်ကတည်းက ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံစာ အုပ်ကို ဖတ်ဖူးခဲ့တယ်။ သူများကကောင်းတယ်ညွှန်းလို့ဖတ်ကြည့်ရင်း ဖတ်ဖူးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ အဖြစ်က ဒီလိုပါ။ ကျွန်တော်တို့မိသားစုက ဆင်းရဲပါတယ်။ ထမင်းနပ်မမှန်တဲ့အထိ ဆင်းရဲခဲ့ကြတာပါ။ အဲ့ဒီလိုထမင်းနပ်မမှန်တော့ ကျွန်တော် လည်း အလိုအလျောက် အိမ်ခေါင်းရင်းကဘုန်းကြီးကျောင်းကိုရောက်ခဲ့ရတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆွမ်းခံတယ်။ ကျောင်း ဝေယျာဝစ္စလုပ်တယ်။ ကျောင်းမှာပဲစားတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကနေပဲ စာသင်ကျောင်းတက်တယ်။ ကျောင်းအိပ် ကျောင်း စားဘဝနဲ့ ကျွန်တော်က ဝမ်းရေးကိုဖြေရှင်းတယ်။ တခါတလေ ကျောင်းကပိုတဲ့ထမင်းကျန်ဟင်းကျန်လေးတွေကို အိမ်က ပြေးပေးရင်း မိသားစုကိုလည်း ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်။ ထူးထူးခြားခြား...
ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းညွှန် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း OKKW Related posts ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ခေတ်နှစ်ခေတ် (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဘတို့ ဆေးရုံ (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ အဖျားရှူးနေတယ် … (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဈေးရုံကြီး (0) ကာတွန်း OKKW ရဲ့ မိုက်တယ် … မိုက်တယ် … မိုက်ဆဲ … (0)
ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ ယောင်နေသူတွေ …
ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ ယောင်နေသူတွေ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ဆွေသား Related posts ကာတွန်းဆွေသား ● အစည်းအဝေး စနေပြီ (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲ့ကိုင်ရှင်ကြီး (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ အဆင့်မြင့် ဘယာကြော်တွေ ရမယ် … (0) ကာတွန်း ဆွေသားရဲ့ တရားစောင့်နတ် (0) ကာတွန်း ဆွေသား ● ငြိမ်းချမ်းရေးတဲ့ (0)
ထွန်းခိုင်၊ ဝင်းနန္ဒာ (Myanmar Now) ● လာမှာလား၊ ကြာဦးမှာလား ဒလတံတား (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၈ ဧရာဝတီမြစ်ကူး စစ်ကိုင်းတံတားကြီးကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရ ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့စဉ်တုန်းက နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင် က “စစ်ကိုင်းတံတား” ဆိုတဲ့ သီချင်းထဲမှာ “တံတားဆက်ပြီးပြီ… သွားမယ့်ခရီးသည် …ငှက်သမ္ဗန် ကူးတို့ဆိပ်က အိပ်ရရှာပြီ … အခုများတလီ … ဗမာလူမျိုးတွေ အလုပ်မရှိတော့ … တံတားကြီးကို ကြည့်ကာငိုမိသည်…” ဆိုပြီး ငှက်မခတ်ရတော့တဲ့ သမ္ဗန်သမားတွေအကြောင်း ထည့်သွင်း စပ်ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ တံတားထိုးခြင်းကြောင့်ရရှိတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေက မနှိုင်းမယှဉ်နိုင်အောင် များပြားလေ့ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၆၈ သန်းကျော် ကုန်ကျမယ့် ရန်ကုန်မြစ်ကူး ဒလတံတား တည်ဆောက်ရေး...
မိုးမခ ဇူလိုင် ၂၀၁၈ – အတွဲ ၅၊ အမှတ် ၃ တကယ်ထွက်ပြီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၈ အများပြည်သူတွေ တမေးတည်းမေးနေကြတယ်။ မထွက်တော့ဘူး မို့လား။ မထွက်နိုင်တော့ဘူး မို့လား။ မထွက်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။ ထွက်ပါတယ်။ ဒီလလည်း မိုးမခမဂ္ဂဇင်း ကို ထုတ်ဖြစ်အောင် ထုတ်လိုက်တယ်။ စာဖတ်သူတွေအတွက်၊ ၀ိုင်းတော်သားတွေအတွက်၊ ကလောင်ရှင်တွေအတွက်။ ဆဲဗင်း ဇူလိုင်ကော နိုင်းတင်းဇူလိုင်အတွက်ပါ ထုတ်ပါတယ်။ အမြို့မြို့ဆိုင်တုိုင်းမှာ မေးမနေပါနဲ့။ ရန်ကုန်က ဆိပ်ကမ်းသာဖြန့်ချိရေးကိုသာ တုိုက်ရိုက် မေးဝယ်ပါ။ စာကြည့်တိုက်တွေဆီလည်း Save The Library ကွန်ယက်ကနေ ပို့ပေးပါတယ်။ ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉...
ငြိမ်းစု ● မာနယ်ပလောက မှော်ဝင်ည (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ ၁၉၈၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ဆရာနိုင်ဝင်းဆွေရဲ့”ရေဆန်လမ်း” “မဟူရာမေတ္တာ” စတဲ့ စာ အုပ်တွေအပါအဝင် အခြားနိုင်ငံရေးစာအုပ်တွေ အတော်များများ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ပေါ်ပေါ်တင်တင် ဖတ်ရတာမျိုးတော့ မ ဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီအချိန်က ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေ လက်ထဲတွေ့လို့ကတော့ အမေးအမြန်း မရှိဘူး။ တခါတည်း ဖမ်းထည့်လိုက် တာပဲ။ စာအုပ်ဆိုင်ကလဲ မသိတဲ့လူဆိုရင် ငှားဖို့မပြောနဲ့ ထုတ်ကိုမပြတာ၊ ခုတော့ ဒီလိုစာအုပ်တွေ ပြန်လည်ထုတ်ဝေ နေ ကြတာမြင်ရတော့ ကြည့်နူးမိပါရဲ့ ..။ အဲဒီအချိန်က နောက်ဆုံးဖတ်လိုက်ရတဲ့စာအုပ်က သခင်တင်မြရဲ့ “ဘုံဘဝမှာဖြင့်” စာအုပ် ပြီးအောင်တောင် မဖတ်လိုက်ရပါ ဘူး။ ထောင်ထဲရောက်သွားလို့လေ။ တော်လှန်နယ်မြေရောက်မှပဲ တပ်ရင်းမှာ...
ကိုဇော် (ကလေးမြို့) ● ပြောရင်မောတယ် ပြေးရင်းနှေးတယ် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၈ ခလုတ်တိုက်မိရင် ကျောက်ခဲပဲ ခေါင်းပေါ်ပြုတ်ကျရင် သစ်ကိုင်းပဲ လေထဲလွင့်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ တဒိုင်းဒိုင်းဝင်တိုက်နေတဲ့ ခေါ်သံတွေ အိပ်မက်ထဲဝင်ဆွဲတဲ့ ခွေး အိပ်ရာထဲဝင်စားတဲ့ ကျား ရေခဲသေတ္တာထဲက အသား အနာဂတ်ကို အမြန်ပြန်နွှေးထား ဖျစ်ဖျစ်မြည်အောင် အရည်ပျော်ကျနေတဲ့စာသားတွေ ကမ္ဘာဟာ ပျော်စရာလည်းကောင်းပါတယ် အေကေ ၄၇ ကိုင်ထားတဲ့ စင်ယော်တကောင်ဟာလည်း ခင်ဗျားမျက်ဝန်းတွေထဲ ဖြတ်ပျံသွားပါတယ် သူ့ကိုယ်သူဖောက်သောက်နေတဲ့ ကလေးတယောက်လည်း ခင်ဗျားဦးနှောက်ထဲ ဝင်ခွေသွားပါတယ် အဲ့ဒီကလေးလည်း ဘယ်တော့မှမသေတော့ပါဘူး ခင်ဗျားလည်းပြန်ရှင်မလာတော့ဘူး ။ ။ ကိုဇော် (ကလေးမြို့) ၂၆၊ ၁၊ ၂၀၁၈ Tags: ကိုဇော် (ကလေးမြို့) Related...
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ကြံခံရသူ …
ကာတွန်း လိုင်းလုဏ်ရဲ့ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ကြံခံရသူ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
မောင်လူပေ ● အမေရိကားရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ ဒီနေ့ July 4th က အမေရိကားရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၂၄၂) နှစ်ခန့်က ၁၇၇၆ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ (၄) ရက်နေ့မှာပေ့ါ။ အင်္ဂလိပ်ပိုင် ကိုလိုနီပြည်နယ် (၁၃) ခု စုပေါင်းပြီး ‘အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု’ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံသစ်တစ်ခုတည်ထောင်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းနဲ့ တရားဝင်ကြေညာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် တရားဝင် လွတ်လပ်ရေး နေ့အဖြစ် ဒီနေ့ရောက်တိုင်း အမေရိကန်တွေဟာ မီးရှူးတွေဖေါက်၊ ချီတက်ပွဲတွေလုပ်၊ ပျော်ပွဲတွေကျင်းပပေါ့။ အသားကင် ကြိုက်တဲ့လူမျိုးတွေမို့ BBQ တွေလုပ်ကြတယ်။ မိတ်ဆွေတွေ၊ မိသားစုတွေ ပြန်ဆုံကြတယ်။ သူတို့ကြိုက်တဲ့ ဘေ့စ်ဘော (Baseball) အားကစားနည်း ကစားသူလည်း ရှိရဲ့။...
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ မပြောင်းလဲသူ …
ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ မပြောင်းလဲသူ … (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ Tags: ကာတွန်း ရာဇာသာစည် Related posts ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ပျော်လို့ဝရင် မော့ကြည့်ပါ … (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ အပျော်တမ်းအဖွဲ့ (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ ဘာကူညီပေးရဦးမလဲ … ပြော … (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တရားလေးတော့ ထည့်ပါဦး (0) ကာတွန်း ရာဇာသာစည်ရဲ့ တစစ် စစ်နဲ့ (0)
အမ္ဗနဒီကျော်စွာ ● ကျွန်တော်နှင့် အနာဂတ်များပျောက်ဆုံးခြင်း ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ်ဒေသ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ ဂူအတွင်းမယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ထမ့်လုံခွန်နမ့် လိုဏ်ဂူအတွင်း ဇွန်လ (၂၃) ရက်နေ့ကတည်းက ဝင်သွားသည့် ကျောင်းသားလူငယ် (၁၃) ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့ များ၊ နိုင်ငံတကာက ပူးပေါင်းကူညီသူများဖြင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံး၍ ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပြီး ၃.၇.၂၀၁၈ အထိ ရှာဖွေမှုများ ဆက် လက်လုပ်ဆောင်နေကြပြီး ၁၀ ရက်မြောက်နေ့မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကလေး (၁၃) ဦး၏ မိဘဆွေမျိုးများ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့များ ရဲတပ်ဖွဲ့များ ထိုင်း တပ်မတော်မှ စစ် သားများ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်မှ ရဲဘော်များ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ အရာရှိများ...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● လျှပ်စစ်ပေါ်လစီနဲ့ လျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်များအကြောင်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၄၊ ၂ဝ၁၈ MRTV အင်တာဗျူး၊ ယခင် ညွှန်ချုပ်နှင့် လျှပ်စစ်ဒုဝန်ကြီး ဦးမော်သာထွေး ဒီအကြောင်း နားထောင်ပြီးပါပြီ။ အခုရေးမယ့် BE Civil က လျှပ်စစ် ဒုဝန်ကြီးလုပ်ခဲ့တယ်။ အဂတိတွေ Low QC တွေပြောမဲ့လူ မဟုတ်လောက်ဘူး။3phase.power = root3 x V x I cos(thida) မသိတဲ့ မိုးကျတွေထက်တော့ သာမှာသေချာပါတယ်။ 1982 Civil လို့ ပြောကြတယ်. ဆည်မြောင်း ဌာနကနေ Dam ဆောက်ရင်း ရေအားလျှပ်စစ်ဝင်လုပ်ရင်း ဒုဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်။ တရုတ်အားပေး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုကို (စက်မှုတက္ကသိုလ်)...
မြန်မာပြည်ရေဘေး ကူညီရေး ရန်ပုံငွေ ဂီတနဲ့ဈေးရောင်းပွဲ ဇူလိုင် ၁၄ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်ရေဘေးဒုက္ခသည်များကူညီရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နေရာချထားရေးတွေမှာ တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေပြီး တက်နိုင်သလောက်ကူညီသွားဖို့ ဂီတမှူးကိုခင်စိုး ဦးစီးတဲ့ G-2 Live Band၊ Northern California Burmese Organizers (မြောက်ပိုင်း ကာလီဖိုးနီးယား ပွဲစီစဉ်သူများ ပရဟိတအဖွဲ့၊ နွေဦးဒိုးပတ်အဖွဲ့ ပရဟိတ အဖွဲ့ တို့နှင့်အတူ Northern California ရှိမြန်မာ တိုင်းရင်းသားမိသားစုများ စုပေါင်းကျင်းပမယ့် Dinner & Music (ဂီတသံစဉ် ညဈေးရောင်း) ရန်ပုံငွေပွဲလေးသို့ ကြွရောက် အားပေးလှူဒါန်းကုသိုလ်ယူကြပါရန် လေးစားစွားဖြင့် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။ No tags for this post. Related posts No...
ဂီတပညာရှင် ကိုရဲလွင် ပြောပြတဲ့ ပန်းရဲ့လမ်း၊ ပြည်တွင်းစစ်၊ မဇ္ဈိမ လစ္ဆ၀ီလေးများ K ငြိ်မ်းချမ်း (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၄၊ ၂၀၁၈ ၂၀၁၄ခုနှစ် ENVOYဂျာနယ်မှာ အမှုဆောင် အယ်ဒီတာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ် ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာတွေနဲ့အကြောင်း အရာအလိုက် အင်တာဗျုးများလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို ဆရာ၊ ဆရာမများကတော့ မောင်စိမ်းနီ၊ မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ)၊ မောင်တင်သစ်၊ မောင်သိန်းဇော်၊ စန်းဦး၊ အောင်ဇင်မင်း၊ ကိုရဲလွင်၊ သစ္စာနီ၊ မင်းသစ်၊ စမ်းစမ်းနွဲ့(သာယာဝတီ)၊ ဖျာပုံနီလုံဦး၊ မောင်ဒေါင်း၊ ဘုန်းသက်ပိုင်၊ ကောက်နွယ်ကနောင်၊ မောင်သွေးသစ်၊ မိုးဝေး၊ အောင်ဘညိုတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာ၊ ဆရာမများထဲမှ ဆရာ မင်းသစ်၊ မောင်စိမ်းနီ၊ ဆရာ အောင်ဘညို၊ ဆရာ ကောက်နွယ်ကနောင်တို့ကတော့ ကွယ်လွန်ခဲ့ကြပါပြီ။ ဆရာ/မများနဲ့ခဏတာ မေးမြန်းခဲ့ရမှုအတွက် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားဖြစ်ရပြီး...
Page4of 909«1...23456...909»